वर्गहरू द्वारा पसल
एप प्राप्त गर्नुहोस्
डेलिभरी : Nepal NP
सबै देशहरू हेर्नुहोस्
स्टोरहरु बीच स्विचिंग तपाइँको वर्तमान कार्ट बाट उत्पादनहरु लाई हटाउनेछ।
१००+ मिलियन उत्पादनहरु
द्रुत डेलिभरी उपलब्ध
4.2 Trustpilot मा रेटिंग
यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय अनलाइन किनमेल सजिलो बनाइन्छ
इलेक्ट्रोनिक्स र उपकरणहरु
& मोबाईल फोन र सहायक उपकरणहरु
उपकरण र घर सुधार
खेलकुद र उपकरणहरु
सामान र यात्रा गियर
क्याम्पिङ पानी फिल्टर
गो मा सुरक्षित र सफा पानी!
कपाल नझार्ने सामग्रीहरू
दाँत सेतो बनाउनेहरू
कपाल जडान तथा विगहरू
स्वास्थ्य र घरेलु
निद्रा तथा घुराइ सम्बन्धि सामग्रीहरू
एलईडी स्ट्रिप लाइटहरू
पार्टी रंग संग आफ्नो छुट्टी घटनाहरु उज्यालो!
ब्लेन्डर र मिक्सर ...
कम्प्युटर मरमत किटहरू ...
एक्स्टरनल हार्ड ड्राइभ ...
पावर स्ट्रिप ...
ट्याब्लेट केसहरू ...
सदस्यता लिनुहोस् र तपाइँको पहिलो खरीद मा सम्म छुट 15% प्राप्त गर्नुहोस्।
कृपया एक मान्य ईमेल ठेगाना प्रविष्ट गर्नुहोस्।
लि्ग चयन गर्नुहोस् पुरुष महिला अन्य
व्यायाम बाइक ...
ह्याण्ड ग्रिपरहरू ...
फिसिङ औजारहरू ...
रेसिस्ट्यान्स ब्याण्डह ...
स्पोस्ट्स् वाटर बोटलहर ...
क्याम्पिङ् गियर ...
खेलौना र खेलहरु
स्पाई ग्याजेट्स ...
बोर्ड खेल ...
ह्याण्ड पपेट्स् ...
कार्ड गेम्स् ...
एक्शन फिगर्स ...
टाइल गेम्स् ...
कृपया तपाइँको सदस्यता को पुष्टि गर्न को लागी तपाइँको ईमेल जाँच गर्नुहोस्।
Nepal मा सर्वश्रेष्ठ अन्तराष्ट्रिय अनलाइन किनमेल अनुभव प्लेटफर्म
Ubuy ले तपाईंलाई आफ्ना घरहरूमा सहज तरिकाले बसेर र आफ्नो घरदेलौमा डेलिभर गर्नका लागि आफ्ना आवश्यकताहरूमा क्लिक गरेर शीर्ष ब्राण्डेड उत्पादनहरू छनोट गर्ने अवसर प्रस्ताव गर्छ। तपाईंले गर्ने विभिन्न प्रकारका अनुपम उत्पादनहरूको नविनतम प्रचलित खोज यहाँ समाप्त हुन्छ। विश्वव्यापी ब्राण्डहरूबाट अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादनहरूको व्यापक दायरा तपाईंको औंलाका टुप्पोहरूमा उपलब्ध हुन्छन्। हामीले तपाईंका सबै विशिष्ट आवश्यकताहरू पूरा गर्ने उत्कृष्ट सेवाको साथमा विश्वस्तरीय अनलाइन किनमेल अनुभव उपलब्ध गराउँछौं। हाम्रा उत्पादनहरूको मूल्य एकदमै उचित छन् र सजिलै अन्य कतै उपलब्ध हुँदैन। मानव पहुँचको संयोजनमा हाम्रो उच्च प्रविधिमा आधारित प्रणालीहरूले हामीसँग तपाईंको आकर्षक र सुखद अनलाइन किनमेल अनुभव रहेको छ भनी सुनिश्चित गर्छ। ग्राहकको सन्तुष्टिका लागि हाम्रो महत्त्व तपाईंलाई सर्वश्रेष्ठ, अवरोधरहित र सुखद किनमेल अनुभव उपलब्ध गराउनका लागि गर्ने प्रत्यके क्रियाकलापमा हुन्छ। हाम्रो विविध वर्गका उत्पादनहरूमा फेसन र गरगहना, मोबाइल तथा ट्याब्लेटहरू, भिडियो गेमिङ तथा मनोरञ्जन, खेलौना तथा गेमहरू, बच्चाको स्याहार, घरेलु सामान, बागवानी हात उपकरण, इलेक्ट्रोनिक्स तथा कम्प्युटरहरू, स्वास्थ्य स्याहार र पूरकहरू, sports and fitness, कार्यालय तथा विद्यालयका आपूर्ति, सुन्दरता तथा पर्फ्युम, यात्रा र भ्रमणहरू र automobile accessories समावेश छन्। हामी तपाईंको मनले चाहाने लगभग हरेको प्रकारको उत्पादन प्रस्ताव गर्छौं। अगाडि बढ्नुहोस् र Ubuy सँग अनलाइन किनमेलको जादुमय शब्द अन्वेषण गर्नुहोस् !
s%s मा सबैभन्दा धेरै बिक्री हुने उत्पादन क्याटेगोरीहरू
Ubuy का लोकप्रिय उत्पादन वर्गहरूमा इलेक्ट्रोनिक्स, सेल फोन र सहायक उपकरणहरू, भान्सा र डाइनिङ, पुस्तक र कार्यालयका उत्पादनहरू पर्छन्। हामीले तपाईंका विशिष्ट आवश्यकता र चाहनाहरू पूरा गर्ने व्यापक दायरामा लोकप्रिय उत्पादनका वर्गहरू प्रस्ताव गर्छौं। अब तपाईं लोकप्रिय वर्गमा उत्पादनहरूको सूची खोज्न र आफ्नो अमूल्य समय बचाउनका लागि थप द्रुत र प्रभावकारी तरिकामा आफ्नो अनलाइन किनमेल गर्न सक्नुहुन्छ। Ubuy भनेको बजारमा उत्कृष्ट अनलाइन किनमेल साइटहरू मध्ये एक हो।
हामीले तपाईंका आवश्यकताहरू र तपाईंको बजेटसँग पनि सुहाउने टिभी र भिडियो, गृह अडियो र संगीत, क्यामेरा र ड्रोनहरू, धारण गर्न योग्य प्रविधि र विद्युतिय सहायक उपकरणहरू जस्ता सबै विद्युतिय वस्तुहरूका लागि उत्कृष्ट अनलाइन किनमेल प्रस्तावहरू उपलब्ध गराउँछौं। मोबाइल, ल्याप्टप, टिभीहरू आदिको हाम्रो कलेक्सन नवीनतम अद्यावधिक प्रस्ताव र वर्षभरी नै छुटहरू उपलब्ध गराउँदै व्यापक दायराको छनोटमा प्रस्ताव गरिन्छ। उच्च गुणस्तरका उत्पादन र सेवाहरूले तपाईंलाई आनन्दमय अनलाइन किनमेल अनुभव गर्न सक्षम गराउँछ।
फेसन र गहना
Ubuy भनेको ग्राहकहरूलाई अधिकतम सन्तुष्टि उपलब्ध गराउनका लागि विभिन्न साइज, आकार, रङ र डिजाइनहरूमा उपलब्ध हुने ह्याण्डब्याग, पोशाक, कस्मेटिक, ज्वेलरी, जिन्स, टि-सर्ट र जुत्ताहरूको कलेक्सन प्रस्ताव गर्ने उत्कृष्ट अनलाइन किनमेल पसलहरू मध्ये एक हो। तपाईंसम्म उत्कृष्ट उत्पादनहरू मात्र पुग्छ भनी सुनिश्चित गर्न विशेष ख्याल राखिएको छ। अब बटनको एक क्लिकमा उपलब्ध हाम्रा विभिन्न दायराका लोकप्रिय फेसन उत्पादनहरूद्वारा मोहक र आकर्षक देखिनुहोस्।
विभिन्न प्रिमियम ब्राण्डहरूका हाम्रो आकर्षक दायराका पर्फ्यूमहरू तपाईंका भावहरूलाई उत्तेजित गर्न र तपाईंलाई अद्भुत महसुस गराउनका लागि विभिन्न प्रकारका सुगन्धहरूमा उपलब्ध छन्। तिनीहरूले तपाईंको मनोदशा सुधार्छ र तपाईंलाई आफ्नो बारे थप आत्मविश्वासी र अझ राम्रो महसुस गराउँछ। अब आफ्ना भावहरूलाई माया गर्न र आफू गएको ठाउँमा आफ्ना सुगन्धहरू छोड्न र बोल्ड कथन दिन हाम्रा पर्फ्यूमहरू प्रयोग गरी हेर्नुहोस्!!
मोबाइल फोन र सहायक उपकरणहरु
Ubuy मा मोबाइल फोन र सेल फोनका सहायक उपकरणहरूमा नवीनतम अनलाइन प्रस्ताव र उत्कृष्ट डिलहरू प्राप्त गर्नुहोस्। हामीले तपाईंका व्यक्तिगत स्वाद र प्राथमिकताहरूसँग सुहाउने विभिन्न विशेषताहरू भएको गतिशील दायराका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध गराउँछौं। तपाईंलाई प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यहरूमा उत्कृष्ट अनुभव उपलब्ध गराउनका लागि मोबाइल फोनहरूका धेरै ब्राण्डहरू उपलब्ध छन्। यहाँ आफ्नो सपनाको मोबाइल फोन फेला पार्नुहोस् र शैलीमा जडित रहने आफ्नो इच्छा पूरा गर्नुहोस्।
गेमिङ ल्यापटपहरूको हाम्रो छनोटले लगातार मनोरञ्जन र सम्पूर्ण परिवारमा रमाइलो उपलब्ध गराउँछ। यसले तपाईंलाई जोडिन, आराम गर्न र आफ्ना सिर्जनात्मक शैलीहरू खोज्न मद्दत गर्छ। ल्यापटपहरूमा उच्च गुणस्तरका प्रोसेसर र ध्वनि प्रणालीहरूले पहिले कहिल्यै नभएको इमर्सिभ गेमिङ अनुभव प्रस्ताव गर्छ।
तपाईंलाई उत्कृष्ट सहजता र सन्तुष्टि उपलब्ध गराउने ब्राण्डेड सुन्दरता उत्पादनहरूको हाम्रो मोहक दायरासँग आफ्ना रूपहरू र व्यक्तित्व परिष्कृत गर्नुहोस्। हाम्रा उत्पादनहरू छाला-मैत्रीपूर्ण छन् र दीर्घकालीन सुन्दरता उपलब्ध गराउँछ भनी सुनिश्चित गर्नका लागि तिनीहरूलाई उत्कृष्ट हदसम्म परीक्षण गरिन्छ। त्यसकारण सुन्दर देखिनुहोस् र सही छनोटसँग उत्कृष्ट महसुस गर्नुहोस्।
घरका लागि उत्पादनहरू
त्यसकारण सुन्दर देखिनुहोस् र सही छनोटसँग उत्कृष्ट महसुस गर्नुहोस्। तसर्थ, गृह सुधार उत्पादनहरूको हाम्रो कलेक्सनले तपाईंलाई आफ्नो घर थप भाइब्रेन्ट र सुन्दर बनाउनमा मद्दत गर्छ। हामीसँग तपाईंको सजावटमा सुहाउने र तपाईंको घरमा मोहक थप्ने व्यापक प्रकारका रङ, डिजाइन, बनावट र आकारहरू छन्।
हाम्रो कलेक्सनमा सबै प्रकारका कार्यालय उत्पादनहरू उपलब्ध छन्। तपाईंले आफ्नो कार्यालयको कुनै पनि आपूर्ति खोज्न कतै हेर्न पर्दैन। तपाईंले यहाँ Ubuy मा आफ्ना विशिष्ट आवश्यकताहरूमा सुहाउने उच्च गुणस्तरको उचित मूल्यका उत्पादनहरू फेला पार्नु हुने छ।
Ubuy, हामी डेलिभर गर्छौं।
Nepal मा एउटा उत्कृष्ट अनलाइन किनमेल पसल हो
Ubuy भनेको Nepal मा एउटा उत्कृष्ट अनलाइन किनमेल पसल हो। हामीले विश्वभरमा धेरै प्रकारका अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादनहरू उपलब्ध गराउँछौं। हाम्रो पोर्टल उच्च रूपमा ग्राहक मैत्रीपूर्ण छ र सेवाहरू प्रोम्प्ट र सन्तोषजनक छन्। Ubuy मा किनमेल गर्न रमाइलो र मनोरञ्जक हुन्छ। हामीले ग्राहकको सन्तुष्टि सुनिश्चित गर्न असाधारण सेवासँग संयोजित हाम्रा उच्च मापदण्डहरू पूरा गर्ने उच्च गुणस्तरका उत्पादनहरूसँग डिल गर्छौं।
Ubuy मा नवीनतम अनलाइन किनमेल प्रस्ताव र छुटहरू प्राप्त गर्नुहोस्
Ubuy ले वर्षभरी समय समयमा उत्कृष्ट अनलाइन किनमेल प्रस्ताव र छुटहरू प्रस्ताव गर्छ। सबै पर्व र विशेष दिन विशेष छुट र प्रस्तावहरूका लागि सही समय हो। ग्राहकहरूले पोर्टलमा उपलब्ध हुने व्यापक प्रकारका डिल र प्रस्तावहरूबाट छनोट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण अगाडि जानुहोस् र केही पैसा बचत गर्न आफ्नो गोल्डेन अवसर समात्नुहोस् र तपाईंले सधैं चाहनुभएका उत्पादनहरू प्राप्त गर्नुहोस्।
तपाइँको पहिलो खरीद मा १५% सम्म छुट लिनुहोस्।
भन्सार शुल्क र शुल्क
Ucredit को बारेमा
3-6 व्यापार दिन
१०+ व्यापार दिनहरु
Afghanistan Armenia Azerbaijan Bangladesh Bhutan Brunei Cambodia China Georgia Hong Kong India Indonesia Iraq Japan Kazakhstan Kyrgyzstan Laos Macao Malaysia Maldives Mongolia Myanmar Pakistan Palestine Philippines Singapore South Korea Sri Lanka Taiwan Tajikistan Thailand Timor-Leste Turkmenistan Uzbekistan Vietnam सबै देशहरू हेर्नुहोस्
Ubuy लोकप्रिय खोजहरु
मोबाइल र ट्याब
प्रतिलिपि अधिकार © 2022 Ubuy Co. सर्वाधिकार सुरक्षित.